हुम्लाको सिमीकोटमा तारा एयरको विमान दुर्घटना, - Muldhar Post
हुम्लाको सिमीकोटमा तारा एयरको विमान दुर्घटना,
मूलधार सम्वादाता २०७४, १२ मंसिर मंगलवार 616 पटक हेरिएको
हुम्ला – हुम्लाको सिमीकोट विमानस्थलमा तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको छ ।
विमानस्थलबाट उडान भर्ने क्रममा विमान दुर्घटना भएको प्रदेश नम्बर ६ का प्रहरी प्रमुख एआईजी रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए । दुर्घटनामा पाइलट घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा विमानको अगाडिको भागमा क्षति भएको छ । विमान दुर्घनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ भने उद्दारको काम जारी छ ।
विमान चालक दलका दुईजना घाइते रहेको बताइएको छ । टायर पञ्चर भएर रनवेमा विमान दुर्घटना भएको हो ।
संसारका यस्ता कयौं सवालहरु छन्, जसलाई हामीले बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएका छौं । तर, पनि अहिलेसम्म हामीलाई त्यसको जवाफ थाहा छैन । जस्तो, अण्डा जेठो कि कुखुरा ? तर, हामी आज यस्तो प्रश्नको जवाफ खोज्न गइरहेका छौं, त्यसको पनि लामो समयदेखि मानिसहरुलाई जवाफ मिलिरहेको छैन- अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी …
कयौं शाकाहारी मानिसहरु अण्डलाई मांशाहारी सम्झिएर खाँदैनन् । उनीहरुको तर्क हुने गर्दछ, अण्डाले चल्ला दिन्छ, यसकारण यो मांशाहारी हो । तर, कुरा यस्तै हो भने त दूध पनि त जनावरबाट नै निस्कन्छ, त्यो कसरी शाकाहारी हुन्छ ? यदि तपाईंलाई यस्तो लाग्छ कि अण्डाले चल्ला दिन्छ, यसकारण यो मांशाहारी हो भने तपाईंले यो पनि थाहा पाउन जरुरी छ कि बजारमा पाइने प्रायः अण्डाहरु अनफर्टिलाइज्ड हुन्छन् अथवा चल्ला कोरल्न सक्ने हुँदैनन् ।
यो गलत धारणा वा बुझाईको अन्त्य गर्नको लागि वैज्ञानिकहरुले पनि वैज्ञानिक ढंगले यसको जवाफ दिने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुको अनुसार अण्डा शाकाहारी हो ।
त्यसो त, प्रायः सबैलाई थाहा छ कि अण्डाको तीन भाग हुन्छ- बोक्रा, सेतो भाग र पहेंलो भाग । अनुसन्धानका अनुसार, अण्डाको सेतो भागमा केवल प्रोटिन मात्र हुन्छ । त्यसमा जनावरको कुनै पनि भाग हुँदैन । यसर्थ, प्राविधिकरुपमा अण्डा ह्वाइट भेजिटेरियन अर्थात् मासुरहित हुन्छ ।
अण्डाको सेतो भागमा जस्तै पहेंलो भागमा पनि धेरै नै प्रोटिन, कोलेस्ट्रोल र चिल्लो पदार्थ हुन्छ । तर, जुन अण्डा भाले र पोथीबीचको शारीरिक सम्पर्कपछि परेको हुन्छ, त्यसमा गैमिट सेल्स हुन्छ, जसले त्यसलाई मांशाहारी बनाउँछ ।
कुखुराले कसरी दिन्छ अण्डा ?
पोथी कुखुराले ६ महिनाको भएपछि हरेक एक वा डेढ दिनमा अण्डा दिइरहन्छ । अण्डा दिनलाई पोथी कुखुरा भालेको सम्पर्कमा आउनु पर्दैन । यस्तै अण्डालाई नै अनफर्टिलाइज्ड अथवा बतासे अण्डा भनिन्छ । यस्तो अण्डाबाट चल्ला कोरलिन्न । यसकारण, यदि तपाईंले अहिलेसम्म अण्डलाई मांशाहारी भन्ने ठानिरहनु भएको छ भने यसलाई पुनर्विचार गर्ने कि ?